သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, Isis တစ်လက်သည်းနဲ့တူလှပါတယ် - သတင်း Rule
သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, Isis တစ်လက်သည်းနဲ့တူလှပါတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, Isis တစ်လက်သည်းနဲ့တူလှပါတယ်” HAL ကရေးသားခဲ့သည် 90210, theguardian.com သောကြာနေ့ 20th နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 12.35 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, အရာအားလုံးကိုတစ်လက်သည်းတူကြည့်ဖို့စတင်သည်. လူတိုင်းနှင့်၎င်းတို့၏ခွေး Isis နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့များအတွက်လူသတ်သမားစိတ်ကူးနှင့်အတူ parapet အထက်ပေါ်လာသောအခါဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းသူ့ရဲ့အံ့သြစရာမဟုတ်, ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည်အစဉ်အမြဲလုပ်နေကြတာနဲ့အတူတူပါပဲလုပ်နေတာအကြံပြုဟန်.
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးမူပိုင်ရှေ့နေဆိုရင်, ထို့နောက်ရှင်းလင်းစွာအဖြေကိုမူပိုင်ခွင့်သည်ပညတ်တရားကို အသုံးပြု. ပါဝငျသညျ. Isis ထောင်ပေါင်းများစွာသတ်ပျော်ရွှင်စေခြင်းငှါကြောင့်,, ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်မှာ-တိပ်ဂီတသတ်ဖြတ်ကြောင်းသိ.
ပေါလုက Rosenwig, အမိမြေလုံခြုံရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီနီဌာနခွဲများ၏တည်ထောင်သူ, တစ်ကောက်ကျစ်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်. "ဘာ, ဘာမှလျှင်, သူတို့ဆန္ဒအလျောက်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်အခါအကောင့်အသစ်များ၏ချယူပံ့ပိုးပေးမင်းဇော်မှလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်? အဖြေ, အကြှနျုပျ၏စိတျကိုမှ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေတစ်ခုဥဒါဟရုဏ်အတွက်တည်ရှိသည် (DMCA)."
သင်သိလား, အ DMCA, အမေရိကန်သည်ပညတ်တရားသော, ရဲ့ရိုးသားပါစေ, လုံးဝကိုအင်တာနက်ကနေတရားမဝင်အကြောင်းအရာဖယ်ရှားခြင်းအတွက်လုံးဝအောင်မြင်ဖြစ်မထားပါဘူးထို့ကြောင့်အင်တာနက်အစိုးရမဟုတ်သောကြီးကြပ်၏လှည်ရေသည်သွားလာဘို့ဥပဒေပြဌာန်းတဲ့မော်ဒယ်အပိုင်းအစမဖြစ်စေခြင်းငှါ,.
Rosenwig ရဲ့စိတ်ကူးကြော့ဖြစ်ပါသည်, တစ်လမ်းအတွက်. သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကမိမိဆန္ဒအလျောက် Isis ဝါဒဖြန့်ချယူမရနိုင်မယ်ဆိုရင်, ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပဆက်လက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြောင်းဒါပြီးရင်လုပ်. ဒါပေမယ့်မင့်ဆိုရာဇဝတ်မှု - မူပိုင်ခွင့်ပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇဝတ်မှု, အင်တာနက်အပေါ်ရာဇဝတ်မှုများ၏အဆိုးဆုံးမျိုး, ဖြစ်နိုင်စရာ.
သူ့ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုအစိုးရကဒဏ်ခတ်အရေးယူတဲ့ third-party အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်နွယ်မည်သည့်အကြောင်းအရာအပေါ်မူပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ထို့နောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယူ-Down သတိပေးချက်များပယ်ပစ်ခတ်.
အကယ်စင်စစ် ... ဧကန်အမှန်ထက်တစ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်?
ကျနော်တို့ Legion များမှာ. ကျွန်တော်တို့ဟာအများဖြစ်ကြ၏. ငါတို့သည်သင်တို့အရှုံးမပေး့ဘယ်တော့မှနေကြတယ်
အမည်မသိဆက်ဆက်ဒါကြောင့်မျှော်လင့်. ဒါဟာအခြားအစွန်းရောက်ဖို့သံတူ / တံစို့clichéယူမယ့်: သငျသညျရှိသည်တူ "အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပတ်ပတ်လည် arsing ၏တန်ခိုး" ဖြစ်ပါတယ်အခါ,, ထို့နောက်မျှော်လင့်သင်တစ်ဦးကယ့်တကယ်ပစ်မှတ်ထားလမ်းအတွက်ပတ်ပတ်လည် arsing အားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဝါဒ၏တပ်ဖွဲ့များကနှိမ်နင်းနိုင်.
ပြီးနောက် Isis နှင့်အတူ၎င်း၏ "စစ်" ကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည် ပဲရစ်တိုက်ခိုက်မှုအောက်ပါကာလ၌ရှိ, အ hacktivist စုပေါင်းအွန်လိုင်း Isis ဝါဒဖြန့်တိုက်ဖျက်ရေးမှာတချို့ကွန်ကရစ်အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်.
တစ်ဦးတရာတထောင် twitter အကောင့်ကိုဆင်းယူကြပြီငါးထောင် YouTube ဗီဒီယိုအစီရင်ခံတင်ပြ, နောက်ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှား, န်ဆောင်မှု, အ cyberwar ဇန်နဝါရီလတွင်စတင်ခဲ့သည်ကတည်းက. ပိုများသောအငြင်းပွားဖွယ်, အမည်မသိလည်းဝန်ဆောင်မှုတိုက်ခိုက်မှုဖြန့်ဝေငြင်းဆိုနှင့်အတူ Isis-ဆက်နွယ်အုပ်စုများ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ bombarding ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, အော့ဖ်လိုင်းသူတို့ကိုခေါက်ရန်အားထုတ်မှုအတွက်.
င်း ထိုကဲ့သို့သောအားထုတ်မှုဟာတကယ်တော့ Isis ဆန့်ကျင်ပိုကြီးလှုပ်ရှားမှုကိုကူညီဘယ်လောက် Debate, ဒါပေမဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအမည်မသိ၏ပမာဏကိုအကြောင်းရင်းဆီသို့ဦးတည်ချပြီးသည်အထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်.
သို့သော်အမည်မသိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်လူတိုင်းကြောက်မက်ဘွယ်သောအလောကီသားတို့သည်အစီးမှအပြည့်အဝဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည်. တချို့ကဒုတိယအကြိမ်လှုံ့ဆျောမှုရှိ: အ lulz. ဘယ်နောက်ဆုံးပေါ်အဆိုပြုထားသောနည်းဗျူဟာကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါ,. အမည်မသိ အသေသတ်ခြင်းကို Isis စိတ်ဆိုးဖို့စီစဉ်ထား အားဖြင့် Rickrolling သူတို့ကို.
ကျွန်ုပ်တို့၏လာမည့်လှုပ်ရှားမှု: spam ဖြန် rickrolls နှင့်အတူ ISIS အဖွဲ့ hashtags မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု. အဖြစ်မကြာမီကစုစည်းမယ့်အဖြစ်စာရင်းလှတျမညျ.
- #OpParis (@opparisofficial) နိုဝင်ဘာလ 18, 2015
Hal - အင်တာနက်အပေါ်အလွန်အကျွံအချိန်သုံးစွဲတဲ့သူတော်တော်များများလူတိုင်း၏ရေတိုအာရုံစူးစိုက်မှုကို span ပေးထား 90210 ပါဝင်သည် - အစီအစဉ်ကိုနီဌာနခွဲရဲ့လိုက်တယ်မူပိုင်စိတ်ကူးအဖြစ်အကျိုးခံစားရရှိရေးကိုကြည့်ဖို့အကြောင်းအဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်စွဲအထိသငျသညျစောငျ့ရှောကျပါလိမ့်မယ်.
31221	0 အမည်မသိ, အပိုဒ်, Blogposts, hacking, HAL 90210, အင်တာနက်ကို, အစ္စလာမ့်နိုင်ငံတော်, spam filter, နည်းပညာ, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← တစ်ဦးတိတ်ဆိတ်စွာဝယ်ယူပါကထိုက်သည်, ပန်ကာမပါကို PC? နှုတ်ဆက်ပါတယ် privacy ကို, '' Alexa '' ဟဲလို: အမေဇုံ: Echo, ဒါကြောင့်အားလုံးကြားသောသူအိမ်တွင်စက်ရုပ် →